တော်လှန်ရေးနဲ ့တော်သလင်းလ (Celebrity Gossip) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » တော်လှန်ရေးနဲ ့တော်သလင်းလ (Celebrity Gossip)
Posted by phone_kyaw on Jul 3, 2012 in Contributors | 16 comments
ဒီတစ်ပတ် ကျနော်တင်ပြမဲ့အကြောင်းကတော့Celebrity Gossip လို ့ခေါ်တဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ ့အတင်းအဖျင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို ့ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကလည်း သူတို ့ရဲ ့အတင်းအဖျင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားမယ်လို ့ထင်တယ်။ နာမည်ကြီးတွေရဲ ့လူမမြင်နိုင်တဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေကို ပရိသတ်က မသိပေမဲ့ သူတို ့ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ပညာရှင်တွေကတော့ သိပါတယ်။
ဒီလိုပညာရှင်တွေကို ကျနော်က Watch Dog လို ့နာမည်ပေးချင်ပေမဲ့ခွေးတော့ အဖြစ်မခံနိုင်လို့Watch Peacock လို ့နာမည်ပေးချင်တယ်။
အတိုကောက်ကတော့ WP လို ့သတ်မှတ်ပါ။ Watching Politicians လို ့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင် လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ ့လိင်အရှုပ်တော်ပုံ၊နာမည်ကြီးသတင်းသမားတွေရဲ ့လာဘ်စားပုံတွေကို ဘလော့ဂ်တွေက ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။ သတင်းကတော့ အတိအကျဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ စာဖတ်သူတွေပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကျနော့်တော့ ဒီနေရာ Celebrity Gossip အနေနဲ ့ပဲတင်ပြတာပါ။
အခုတင်ပြမဲ့စလစ်ဘရီတီကတော့ အိနိ္ဒယအခြေစိုက် မဇိမသတင်းဌာရဲ ့ဖောင်ဒါတွေအကြောင်းနဲ ့အယ်ဒီတာတွေရဲ ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Open Society Institute နဲ့National Endowment For Democracy (NED) တို ့ရဲ ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ ့တော်လှန်ရေးသမား လူ ့အခွင့်အရေးသမားတွေရဲ ့အရှုပ်တော်ပုံဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ပြည်တွင်းအခြေစိုက် လျှပ်တံပြတ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်တို ့အပြင် လူ ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ ့ဥက္ကဌ ကိုအောင်မိုးဇော်တို ့ရဲ ့အရှုပ်တော်ပုံလည်း ပါပါတယ်။
ကိုစိုးမြင့်၊ ကိုစိန်းဝင် နဲ ့မသင်းသင်းအောင်တို ့ဆိုတာက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုလားပြည်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး ဟိုတလောကမှ ဦးကျော်ဆန်းနဲ ့ညှိပြီး ရန်ကုန်မှာတောင် ရုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပမီဒီယာတွေထဲမှာ သူတို ့ကတော့ အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ ့အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုခံရတာကို တွေ ့ရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။
ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းရလဲဆိုတာကို စုံစမ်းကြည့်တော့ လျှပ်တပြတ်ဂျာနယ်ရဲ ့အယ်ဒီတာ ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကြောင့်လို ့ဆိုရမယ်ထင်တယ်။
မဇိမဖောင်ဒါနဲ ့အယ်ဒီတာတွေဟာ ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို ့သိရတယ်။ ရန်ကုန်မှာ Mizzima ရုံးခန်းကို ဦးမြတ်ခိုုင်အကူညီနဲ ့ဖွင့်ခွင့်ရတော့ အလုပ်သမားတွေလည်း ခန် ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ ့နာမည်ကြီးမော်ဒယ်မင်းသမီး မေကဗျာလေးလည်း Mizzima ရုံးခန်းမှာ အလုပ်ရသတဲ့။ မင်းသမီးတောင် အလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေ ငွေကို ဘယ်ကရပါသလဲ။ ရှင်းပါအုံးမယ်။
မသင်းသင်းအောင်ဆိုတာက WLB လို ့ခေါ်တဲ့ထိုင်းအခြေစိုက်မြန်မာအမျိုးသမီး သမဂ္ဂက အမှု ့ဆောင်တဦးဆိုတော့ သူလည်းခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှတစ်ယောက်ပါ။
SYCB ခေတ်ကောင်းခဲ့သလို WLB လည်း ခေတ်ကောင်းတဲ့ ရက်တွေရှိခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇-ခုနှစ်မှာ SYCB နဲ့WLB တို ့ပေါင်းပြီး
OSI (ပွင့်လင်းလူ ့အဖွဲ ့အစည်း) ကနေ SYCB နဲ့WLB တွဲပြီး Exposure Trip ထွက်ဖို့ ငွေပေးတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ပွင့်လင်းလူ ့အဖွဲ ့အစည်းကန်ပိန်းဆိုတာက ပြည်ပမှာ လွန်ခဲ့တဲ့လေးငါးနှစ်ကတည်းက လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘယ်လောက်ထိပွင့်လင်းလဲဆိုတာကို ဆက်လက် တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဒါနဲ ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီး မသင်းသင်းအာင်က ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး ကာလကတ္တားကိုထွက်ကြတယ်။
မိန်းမ ၁၀-ဦး။ ကျား ၁ဝ ပါတဲ့ အဖွဲ ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ခင်းတော့ ဟိုလည်ဒီလည်လုပ်ကြပါတယ်။
ဟိုရုံးဝင် ဒီရုံးဝင်နဲ့Exposure Trip လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို ့အဆိုအရ နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနဲ ့ကပ်ပစတီ ဘေးဒင်းလို ့ပြောတယ်။
ညဖက်တော့ ဒွိယံ ဒွိယံ။ နေ့လည်က ချိန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်း တော်သလင်းဇာတ် ခင်ကြသတဲ့။
ဒေလီပြန်ရောက်တော့ ချာတိတ် တကောင်ကို တော့ ၁- လ ၊ ၂- လောက် ဆက်စားပြီး ကျန် ၂- ကောင် ကိုတော့ အတည်ပေါက်ကြီး ဆက်ဆံပါတယ်။
ချင်းမိုင်အခြေစိုက် လူ ့ဘောင်သစ်ဥက္ကဌ လူဝလေးနဲ့တောင်လွတ်မထင်ဘူးလို ့ကြားရပြန်တယ်။ သူတို ့ရဲ ့နိုင်ငံရေးဆိုတာက အရမ်းကို ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လှပါတယ်။ ဒီလိုပွင့်လင်းလူ ့အဖွဲ ့အစည်းကို ကိုမင်းကိုနိုင်တို ့အတုခိုးရင်တော့ မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ သတိရှိဖို ့အတွက် ပြောတာပါ။
အမေရိကန် လင်မယားတွေလိုဖြစ်နေတယ်လို ့ပြောလို ့ရတဲ့ မသင်းသင်းအောင်တို ့ဗမာလင်မယားတွေဟာ
ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် လွတ်စွာ အသုံးချခွင့်ရှိတယ်။ ဆိုလိုချက်က ကြိုက်သလိုသာနေစေ ပျော်သလိုသာလုပ်စေဆိုတဲ့ ပုံစုံမျိုးပါ။
ကိုစိုးမြင့်လည်း သူနားရောက်လာတဲ့အပေါက် အကုန်ဖောက်တာပဲ။ သူညီမယားတောင်မရှာင်ဘူး။
အခုလည်း ရန်ကုန်မှာ မြတ်ခိုင် အကျ မော်ဒယ်လိုလို ကြက်လိုလို မေကဗျာ ဆိုတဲ့ကောင်မကို ရုံးမှာ အလုပ်ခန့်ပြီးကြိတ်နေသတဲ့။ ဒါကြောင့်သင်းသင်းအာင်ဒေလီပြန်လာပြီး အသဲကွဲနေတယ်။
တကယ်တော့ သူတို့အားလုံးဟာ ၉၂- ၉၃ လောက်တည်းက ကျောင်သား တော်လှန်ရေးသမားစိတ်ဓါတ် ပျောက်သွားခဲ့ကြပီ။
သင်းသင်းအောင် NED ကကောင်တချို ့နဲ ့ကုန်းခဲ့သေးတာပဲ။
OSI က မော်ရင်းအောင်သွင်လည်း အဖွဲ့စုံကကောင်လေးတွေကို ဝါးနေတာ။ နောက်ဆုံးအခု ဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ ချာတိတ်ကို ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်တာပဲ။
ဒါကတော့ စလစ်ဘရစ်တီအချို ့ရဲ ့အတင်းအဖျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အပတ်မှာလည်း သတင်းရရင်ရသလို အတင်းအဖျင်းတွေတင်ပြပါအုံးမယ်။
အားလုံးသော မြန်မာတွေ သွားရည်ကျနိုင်ပါစေ။
ဇဂါးမစပ် ဟိုမင်းသမီး ဒုတိယပိုင်းထွက်ပီဗျ…
သတင်းပဲကြား ခုထိ မသိ..အဟိ..ဂိန်..
ကျနော်က ဒါမိုးဒွေ စိတ်မဝင်ဇားပါဝူးခညာ..
အဆွေးသီချင်းတွေပဲ ရှိုဖြစ်တယ်ရှိုဒဲ့ အရှိုဒေါ် ဗွီဒီယိုသစ် ထွက်ရှိ..
အလွမ်း”တေး” .. လေးတွေ “ဆို”တဲ့ တစ်ယောက် လားဗျ .. ?? ဆေးလိပ်တို ကြိုက်တဲ့ ကိုဆေးတို များလား ဘဘစိန် ရေ …
တကယ်ဟုတ်လို့ကတော့ ခုလို ဖေါ်ပေးတာကောင်းတယ်…
သွားရည်တွေ တောက်တောက်ကျရအောင် ရေးတတ်လှချီလား
ပြောနေရင်းနဲ ့ညီလေးတောင် မတ်မတ်လာတယ် ( snare သီချင်းစာသားကို ကူးသုံးပါသည် )
တစ်သက်တာ အမှတ်တရဖြစ်အောင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေနဲ ့ပါ မရိုက်ကြဘူးတဲ့လား…
သရေပဲကျခိုင်းတာလားကိုဘုန်းကျော်ကြီးရဲ့ ။ ဒါဆိုရင်တော့ မီတီယား ဘူးဂျာ။ လုံးကြီးပေါက်လှဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြည့်ချင်ပါရဲ့ဗျာ။ :-)
အဲ့လာမှန်းသိရင် ငါ ၈၈ထဲက တောခိုပါတယ်ကွာ..
အဲ.. ဟုတ်သေးဘူး အဲ့တုန်းက ငါ ၅တန်းဘဲ ရှိသေးတာ
အာ…ကြာဒယ် မနက်ဖန် အလုပ်မသွားတော့ဘူး လစ်တော့မယ်
မကယ်ဘဲ ငါ့ကို တွယ်လွှတ်လိုက်ရင် မိအေး နှစ်ခါနာ ဖြစ်နေအုံးမယ်
တော်ကြာ ဂျီးဂျီး ပြောသလို နှစ်၁၀၀ဝ ကျိန်စာမိပီး ဖင်နာနေအုံးမယ်…..သွပ်…သွပ်
အဲ့သတင်းတွေ ကြားတော့ကြားတယ်ဗျို့ ဖြစ်နေတာလဲ မဆန်းတော့သလိုပါဘဲ(သူရို့ဖက်က ကြည့်ရင်)
စဂါးမစပ် ဟိုသမ္မတကြီးရဲ့သား ….အဲ….သူ့ရဲ့ သမီးလေးတော့ လန်းတယ်ဟေ့ ဖြစ်နိူင်ရင်… ဂလု..အေ့ :O
ဖျက်ရင်ကောင်းမလား ထားရင်ကောင်းမလားတော့ သူကြီးခေါင်းကုတ်နေလောက်ပြီ။ :grin:
ဝင်ရေးမိတော့ အဖျက်ခံရဘို့ များတော့ ဘယ်နှစ်ပွိုင့်လည်း ပါသွားဦးမလဲမသိဘူး။။
အယ် ..ကိုဘုန်းကျော် … လူကသာ ဟိုရောက်နေတာ.. ဒီက ကိစ္စတွေလည်း … ဂြိုလ်တုက လှမ်းကြည့်နေသလား မှတ်ရတယ် … သူ့အပြောနဲ့ သူကတော့ ဟုတ်လို့ … ။
နားရှိလို့သာ ကြားရတယ် .. အဲ .. မြင်ရတယ် … သူတို့ အကြောင်း သိပ်တော့ မသိဘူး ။
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေ ဖတ်ကင်းစပ်ကင်းမလုပ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောသဒုံးကွ
အဲ့သည်ကောင်ကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတာ ဘယ်လောက်တာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာ သိဂျသလား
သူ့ဖာ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်း ဟိုဒင်းလုပ်တာ ဘာဖြစ်လဲကွ
ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ ဗမာနိုင်ငံမတိုးတက်တာ
သဇင်လေးရဲ့ဇာတ်ကားကတော့ အနောက်တိုင်းက ဇာတ်ကားတွေလို စံချိန်မိတယ်
အဟမ်း… ဘယ်ကနေဒေါင်းတာတုုန်းဗျ လင့်လေးရှိရင်လက်တိုု့ပါ
မဇ္ဈိမနဲ့ရော.. လျှပ်တပျက်နဲ့ရော.. ထိပ်တိုက်ကြီးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး..
Gossip လို့တပ်ထားသမို့.. မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက်..
.. မီဒီယာစည်းကမ်းအရ.. ရှောင်ပရစေနော…